Qalabka kuleylka kululeeyo
Kuleylka kulaylka dheeriga ah
Heerkulbeegga bulaacada nalka LED
Galka Guriga iftiinka
Gawaarida Downlight Guryaha
Guryaha Galka Guriga
Badeeco degdeg ah
Dammaanad-qaadka alaabooyinka iyo alaabada oo dhan si loo meeleeyo goobaha
Waxaan ku guuleysanay sumcadda tayada iyo qiimaha tartanka
Xirfadlaha si loo xaliyo naqshadeynta masraxa; Jawaabta degdegga ah ee cillado bixinta
2008 Nidaamka Waxsoosaarka Soo Saarista iyo Maareynta
Kooxda QC-da si taxaddar leh u baaraya alaabada inta aanad gacantaada gelin
In ka badan 20 sano waxay la kulmaan Die Cast Products Industry
Ningbo Yotch Mechanical Co., LTD ayaa la aasaasay sannadkii 1992, oo ku yaal magaalada Ningbo, gobolka Zhejiang, oo kaliya 5 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada Ningbo. Aad ayay ugu fiicantahay gaadiidka, oo kaliya 2 kiiloomitir oo kaliya oo ka soo baxa Ningbo East exit of Hangyong express.
Aluminium Wadarta kululaynta
Dheecaan Aluminiumka kuleylka
Aluumini Heat Sink
Dhismo Dhismo Dharka Doolinta
Maxay yihiin shaqooyinka gaarka ah ee nalalka tube, miyaad taqaanaa?
Muujintu waa nooca nalalka iftiinka ah ee ku dhex jira saqafka iyo waa iftiimid. Qalabkeedu ugu weynaa waa in la ilaaliyo midnimada guud ahaan iyo dhamaystirka quruxda dhismaha, mana burburin doono midnimada qumman ee farshaxanka saqafka sababtoo ah rakibidda nalalka
Waa maxay doorka kubadda kululeeyaha ee LED?
waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in aluminium-fiilo kulul ee aluminiumka ah uu ka sareeyo aluminium-dhuminta, iyo muuqaalkuna waa ka fiican yahay kii hore, iyada oo ku xidhan shuruudaha kharashka iyo shuruudaha muuqaalka ee naqshadeynta.
Xaaladaha dib-u-hagaajinta qalabka hawada
Waxaa jira saddex dhibcood oo lagu diiwaangelinayo habka dib-u-habeyn loogu sameeyo nidaamka iyo bamgareynta.
Cinwaanka: Houyin New Industrial Zone, Degmada Qiuga, Degmada Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
Xuquuqda daabacaadda 2018 Ningbo Yotch Mechanical Co., LTD Dhammaan Xuquuqda la Ilaaliyo.
Xiriirada Sitemap RSS XML